Kooxda Chelsea oo soo nooleysay xiisaha ay u qabto xiddiga ka tirsan Bayer Leverkusen ee Leon Bailey – Gool FM
(Yurub) 10 Juunyo 2019. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Chelsea ee ka dhisan dalka Ingiriiska ayaa soo nooleysay xiisihii ay u qabtay xiddiga garabka uga dheela naadiga Bayer Leverkusen ee Leon Bailey.
The Blues ayaa ka ganaaxan inay ciyaartooy la soo wareegto labada suuq kala iibsi ee soo socda inkastoo ay kooxda Galbeedka Magaalada London ka dhisan ay sugeyso natiijada racfaan ay ka qaadatay ganaaxaas.
Si kastaba ha ahaatee, Wargeyska Daily Mail ayaa warinaya in Chelsea ay weli liiskeeda xiddigaha ay suuqa ka doonayso ku jiro laacibka kooxda Leverkusen ee Bailey, laakiin waa inay sugaan illaa waqtiga laga qaadayo xayiraadda suuqa kala iibsiga ka saaran.
Kooxda ka dheesha horyaalka Premier League ayaa muddo dheer la la xiriirinayey saxiixa 21-sano jirkaan, kaasoo shan jeer shabaqa soo taabtay 29 kulan oo uu ciyaaray horyaalka Bundesliga intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkii ugu dambeeyey.
Bayer Leverkusen ayaa lagu soo waramayaa inay dalbatay 80 milyan oo gini haddii ay luminayso Bailey.
Manchester United oo goolhaye David de Gea siin doonta 20 milyan oo gini haddii uu xagaagan u wareego kooxda PSG